Mitady ny tahan'ny Internet ao an-trano? Mitsitsia ny satranao amin'ireto tolotra ireto | Vaovao momba ny gadget
Ny tahan'ny Internet hivezivezy sy hitehirizana
Vao tsy ela akory izay dia vitsy ny safidy rehefa nanakarama Internet. Fifandraisana ADSL miadana izay nahatonga anay hamoy fo tamin'ny fanandramana hiditra pejy web fotsiny. Soa ihany fa nihatsara ny tamba-jotra amin'ny Internet ary mahatratra ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 1Gb izao. Fa toy ny mahazatra, ny safidy maro azo isafidianana, vao mainka sarotra ny mahita ilay safidy tena mifanaraka amin'ny zavatra tadiavintsika ary mamela antsika hitahiry. Noho izany, anio isika dia hanao fampitahana eo amin'ny tahan'ny internet tsara indrindra hisondrotra ao an-trano sy hitehirizana miaraka amin'izay.
Ny tolotra tsara indrindra: Fibre an-trano 100Mb Orange
Ny sarany mora indrindra: Fibre finetwork ihany
Ny tahan'ny feno indrindra: 100Mb Fiber More Mobile
Ny tahan'ny Internet tsara indrindra: Fibre 100Mb an'i Yoigo
Fantatsika izao fa ny fandraisana Internet any an-trano nefa tsy voafetra, mora ary tsy maharitra dia safidy tena misy, fotoana tokony hidirana ao amin'ilay raharaha ary hamakafaka ny isa tsirairay omen'ny mpandraharaha. Vonona ve ianao?
Movistar Mampifandray 300Mb Movistar 300Mbps € 38 / volana
Taratasy Lowi Fibre 100Mbps € 29.95 / volana
Vodafone Fiber 300Mb 300Mbps € 30.99 / volana
Fibre an-trano 100Mb Orange 100Mbps € 30.95 / volana
Fibre 100Mb avy any MásMóvil 100Mbps € 29.99 / volana
Fibre 100Mb an'i Yoigo 100Mbps € 32 / volana
Fibre 100Mb miaraka amin'ny antso Jazztel 100Mbps € / volana
1 Lowi, ny safidy amin'ity Vodafone OMV ity
2 MásMóvil sy ny tahan'ny fibre mora vidy ao aminy
3 Ny tahan'ny Orange Home Fibra
4 Jazztel sy ny tahan'ny fibre vaovao
5 300 Mb hivezivezena miaraka amin'i Vodafone
6 Fibre simetrika 100Mb miaraka amin'i Yoigo ihany
Lowi, ny safidy amin'ity Vodafone OMV ity
Hatramin'izao dia Lowi no iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha te-handray Internet mora vidy izahay. Izy io dia miasa eo ambanin'ny tamba-jotra Vodafone, ka raha tsy mipetraka amin'ny toerana miafina ianao dia afaka mandray soa avy amin'ny fandrakofana fibre tsy misy olana. Ny vidiny dia 29,95 euro fotsiny isam-bolana, izay tahan'ny fibre mora indrindra eny an-tsena.
Ary raha toa tsy dia nisy tombony firy ny vidiny dia mbola misy ihany. Tsy manana faharetana io taha io, noho izany afaka miala na miova isika amin'ny fotoana rehetra tsy atahorana ny sazy na sazy. Ary tsy hampandoaviny vola izahay amin'ny fametrahana na fampindramam-bola amin'ny router. Raha aorian'ny famakiana ny antsipirian'ny tahan'ny fibre an'i Lowi dia tsy afaka miandry ny hanana ny fifandraisanao ao an-trano ianao, dia manana ihany ampidiro ity rohy ity mba hanaovanao ny serivisinao.
MásMóvil sy ny tahan'ny fibre mora vidy ao aminy
Ny mpandraharaha mavo dia nanangana ny fanavaozana ny tsenan'ny taha. Ary amin'izao fotoana izao dia toa mandeha amin'ny lala-mahitsy izy io satria anisan'ny mora vidy indrindra ny fibra sy ny sorona ADSL. Amin'ny € 29,99 isam-bolana fotsiny dia afaka mankafy fibre 100Mb sy antso tsy voafetra avy amin'ny laharana an-tany izahay.
Amin'ity sarany isam-bolana mora ity dia tsy mila manampy zavatra hafa intsony izahay satria maimaimpoana ny fametrahana sy ny router amin'ny fisoratana anarana vaovao. Fa raha tsy maintsy fantatsika fa maharitra 12 volana izany, koa raha te-hanova ny tahan'ny isika alohan'ny faran'ity vanim-potoana ity dia tsy maintsy mandoa sazy isika. Avelanay anao ity rohy ity hanao azy haingana.
Ny tahan'ny Orange Home Fibra
Rehefa nijery ny katalaogin'ny Orange izahay dia nahita ny tahan'ny Home Fiber hanakarama Internet an-trano fa tsy zavatra hafa. Ireo sanda ireo dia mety indrindra ho an'ireo izay mila mitazona ny tahan'ny findainy ankoatry ny fifandraisany ao an-trano ary mitady ihany koa ny laharana an-tany mora vidy. Amin'ny lafiny manokana, dia misy antso tsy voafetra amin'ny laharana an-tanety ary koa ny 1000 minitra hiantsoana finday. Ary amin'ny vidiny inona? Tsara amin'ny € 30.95 isam-bolana ny zava-drehetra.
Ka raha mila fibre misy rakotra Orange isika dia tsara kokoa ny tsy mieritreritra an'izany. Ataovy haingana sy mora ity takelaka ity eto.
Jazztel sy ny tahan'ny fibre vaovao
Taorian'ny fanasana sary azy dia nanolo-kevitra ny Jazztel hanova ny tahan'ny fibre azontsika ifanarahana. Ambonin'izany rehetra izany, raha tsy maharesy lahatra antsika ny tahan'ny Orange satria izy ireo dia miasa eo ambanin'ilay tambajotra fandrakofana. Raha mila manome tahan-kevitra internet ho an'ny Internet fotsiny isika. Jazztel, iray amin'ireo tsara indrindra dia ny taha miaraka amin'ny hafainganam-pandrefesana fibre symmetric 100Mb. Azontsika atao ny mampiasa ny laharana an-tariby tsy misy tahotra ny hampiakarana ny tahanay, satria misy koa antso tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny mpandraharaha.
Ny sandam-bolanao isam-bolana dia 28,95 euro isam-bolana, fa amin'izao fotoana izao dia vintana isika. Misy zavatra tokony hotadidina ao an-tsaina raha mieritreritra ny hanova ny fifandraisana Internet ao an-trano isika. Raha mangataka fampahalalana bebe kokoa na hanao fifanarahana amin'ny iray amin'ireo sarany dia tsy mila manao zavatra hafa ankoatry ny fidirana amin'ity rohy ity ianao.
300 Mb hivezivezena miaraka amin'i Vodafone
Raha te hifanaraka amin'ny Internet amin'ireo mpandraharaha mahazatra izahay mba hialana amin'ny olan'ny fandrakofana, tsy afaka manadino momba ny Vodafone sy ny fibre ONO izy ireo. Manana taha isan-karazany hisafidianana isika, fa raha tsy mitady handany vola be miaraka amin'izay ny hafainganam-pandehan'ny Internet, ny taha tsara indrindra dia tsy isalasalana fa Fiber Ono 300Mb.
Ny zavatra tsara indrindra dia ity tolotra ity dia manana tolotra amin'ny sarany isam-bolana mandritra ny 24 volana, izay tsy handoavam-bola afa-tsy 39 € ihany, ka hitahiry 200 euro mahery. Mba tsy hahadisoanao an'ity tolotra ity dia ny sisa ataonao dia ampidiro ity rohy ity hanakarama azy dieny izao.
Fibre simetrika 100Mb miaraka amin'i Yoigo ihany
Hatramin'ny nandefasan'ny Yoigo ny tsenan'ny tahan'ny fibre, dia nitombo ny safidy ara-toekarena rehefa nanakarama. Amin'ireo sarany telo natolotra, izahay izahay dia manolotra ny mpanelanelana amin'ny 300Mb, indrindra ny vidiny sy ny hafainganana.
Tokony hotadidintsika fa io taha io manana fijanonana 12 volana ary ny sazy farany ambony aloa raha tsy mankatoa azy isika dia 100 euro. Ary aza manahy, satria maimaim-poana ny fisoratana anarana sy ny fametrahana ary tsy hanana fiampangana amin'ny faktiora momba ireo hevitra ireo ianao. Raha liana amin'ity taha ity ianao, azonao atao ny manakarama an'io amin'ny Internet haingana.
Araka ny efa hitanao, misy safidy maro ananantsika raha ny momba ny fandraisana Internet ho an'ny trano. Ary ambonin'izany rehetra izany, safidy maro izay mamela antsika hitahiry. Fantatrao izao ny tolotra tsara indrindra atsy an-tsena tahan'ny internet, ny sarotra ihany sisa tavela. Safidio izay serivisy horaisina. Raha mbola tsy azonao antoka ianao dia afaka mitsidika ny Mampitaha roams ary tadiavo izay ilainao.